September 28, 2021 - Celegroup
September 28, 2021 Celegroup1975 0
unicode ပိုက်ဆံစုနည်း ဗျူဟာ (၆)ချက် ပိုက်ဆံစုတယ်ဆိုတာ ရည်မှန်းချက်တစ်ခုထားပြီး ရေရှည်တည်ဆောက်ထားသင့်တဲ့ အလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကြေးအောင်မြင်မှုမှာ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ဝင်တယ်ဆိုတာထက် ဘယ်လောက်စုနိုင်တယ်ဆိုတာက ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ လူတွေက မဝင်သေးတဲ့ပိုက်ဆံကို မျှော်ကိုးပြီး အကြွေးယူတတ်ကြတယ်။ ဒါက အဓိက မှားယွင်းနေတဲ့အချက်ပဲ။ ကျွန်တော်တို့တွေ ပိုက်ဆံစုနေတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လိုဗျူဟာတွေ သုံးရမလဲဆိုတာ အချက်ကျကျတင်ပြချင်ပါတယ်။၁။ သုံးပြီးမှ မစုလေနဲ့။ လစာထုတ်တာနဲ့ လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို ဝယ်ပြီးမှ ပိုက်ဆံစုတတ်ကြတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ လစဉ်စုဆောင်းမယ့် ပိုက်ဆံပမာဏကို သတ်မှတ်စုဆောင်းပြီးမှသာ လိုအပ်တဲ့အရာတွေကို […]
unicode ဒီအကျင့် (၉)ခုကတော့ သန်းပေါင်းများစွာ ချမ်းသာတဲ့လူတွေရဲ့ ခြိုးခြံချွေတာတဲ့အကျင့်ပါ ထီပေါက်ရင်မင်းဘာလုပ်မလဲ လို့ကျွန်တော့်ကိုမေးလာရင်၊ ဈေးကြီးတဲ့ဇိမ်ခံကားတွေ၊ အိမ်အကြီးကြီးတွေ ဝယ်မယ်လို့ဖြေမှမဟုတ်ပါဘူး။ထီလည်းထိုးလေ့မရှိပါဘူး။ ကမ္ဘာပေါ်မှာအရမ်းချမ်းသာတဲ့လူတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်တိုင်အရမ်းချမ်းသာတဲ့လူတွေဖြစ်နေပေမယ့်လည်း သူတို့ဟာမလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာငွေကို အလဟသ သုံးလေ့မရှိဘူးဆိုတာသိပါလိမ့်မယ်။ အခုတစ်ခါမှာတော့ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာချမ်းသာသူတို့ရဲ့ ခြိုးခြံချွေတာပုံတွေကို အတုယူပြီး မလိုအပ်ပဲငွေမကုန်နိုင်တဲ့နည်း ၉ခုကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ ၁။ အိမ်အကြီးကြီးတွေမှာမနေပါဘူး မက်ဆီကန်နိုင်ငံက Telmex ကုမ္ပဏီရဲ့ chairman နဲ့ CEO ဖြစ်တဲ့ Carlos Slim Helu ဆိုသူဟာ […]
unicode သင့်ကို မုန်းတဲ့သူတွေကို အဆင့်တန်းရှိရှိ အနိုင်ယူပါ အဆင့်တန်းရှိရှိ အနိုင်ယူပါမင်းကို မုန်းတဲ့သူတွေအရှေ့မှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေပြလိုက်စမ်းပါ။မင်းကို မနာလိုသူတွေအရှေ့မှာယုံကြည်မှု့ရှိရှိ နေပြလိုက်စမ်းပါ။ မင်းကို စွန့်ခွာသွားသူအရှေ့မှာအေးဆေးပါ အပြုံးမပျက်ဘူး လို့ သိအောင် နေပြလိုက်စမ်းပါ။မင်း မေတ္တာကို စော်ကားသွားသူအရှေ့မှာ အေးချမ်းတည်ငြိမ်စွာ နေပြလိုက်စမ်းပါ။ မင်းကို တိုက်ခိုက်နေသူတွေအရှေ့မှာပြုံးဖြစ်အောင် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲပြုံးပြလိုက်စမ်းပါ။မင်းကို အထင်သေးပြီး လူရာမသွင်းခဲ့တဲ့ လူတွေအရှေ့မှာ လက်မထောင်နိုင်တဲ့ ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နေပြီဆိုတာ လက်တွေ့ပြလိုက်စမ်းပါ။မင်း မကောင်းသတင်းပြောနေတဲ့ လူတွေနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ ခဲ့ရင်မလုံမလဲ […]
ပိုက်ဆံ ရှာနည်း နှင့် ပိုက်ဆံ အကြောင်း ၁။ ပိုက်ဆံ ရှာရာတွင် ဘယ်တော့မှ ဝင်ငွေတစ်ခုတည်းပေါ်မှာ မရပ်တည်ပါနဲ့။တခြားသော ဒုတိယဝင်ငွေ ဝင်နိုင်အောင် ရင်းနှီးထားပါ။ လူတစ်ယောက်က ဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကို ခြေစုံပစ်ရပ်တည်နေရင် အဲ့ဒီဝင်ငွေ ရပ်တန့်သွားတဲ့နေ့ ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ ဖြစ်ရတက်ပါတယ်။ ဘဝမှာလည်း အားလုံး ဗြောင်းဆန်သွားတက်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ဒုတိယ ဝင်ငွေ ရနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကို အမြဲရှာထားပါ။ ၂။ ပိုက်ဆံ သုံးရာတွင် သင့်မှာ မလိုအပ်တဲ့ […]
လူတိုငျးက ဘဝမှာ စီးပှားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး ဘယျလို ကဏ်ဍမြိုးမှာပဲ ဖွဈဖွဈ အောငျမွငျခငျြတယျ။ ကိုယျလိုခငျြတာတှကေို အမွဲတစရေရှိပိုငျဆိုငျခငျြတယျ ဆိုရငျ မိတျဆှအေနနေဲ့ အမြားကွီး လုပျစရာ မလိုပါဘူး။ဒါလေးကိုပဲ သိထားသငျ့ပါတယျ။ ၁။ ဆန်ဒ အောငျမွငျခငျြတယျ၊ တိုးတကျခငျြတယျဆိုရငျ ပထမဆုံး ရှိရမှာကတော့ အောငျမွငျခငျြတယျဆိုတဲ့ဆန်ဒ အရငျရှိရမှာ ဖွဈပါတယျ။ မိတျဆှမှော “ပွငျးပွတဲ့ ဆန်ဒတဈခု” ရှိနပွေီဆိုရငျ သခြောပါတယျ။ မိတျဆှလေုပျမဲ့ တဈခုတညျးသော အရာက ကိုယျပိုငျဆိုငျခငျြတဲ့ […]
ယနေ့ခေတ် အသက် ၁၅ ၁၆ ဝန်းကျင်နဲ့ ဂေါ်တယ်ထင်နေကြတဲ့ မိန်းကလေးများ သတိပြု ခုခေတ် ၁၅ ၁၆ ဝန်းကျင် မိန်းကလေးတချို့ ရိုင်းတာကို ဂေါ်တယ်ထင်နေကြတယ် အပြောအဆိုတွေက ထဘီထဲကမထွက်ဘူး ကိုယ့်နှုတ်ထွက်စကား ညစ်ညမ်းမှ အထာကျတယ် ထင်နေကြတယ် ။ အင်္ဂလိပ်စကား ညှပ်သုံးရင်တောင် What the Fuck နဲ့ Fuck You Bitch ပဲပြောတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် တန်ဖိုးမထားတာ ဘယ်ယောက်ျားကမှလဲ […]
လည်ချောင်းထဲ ငါးရိုးစူးပါက အမြန်သက်သာအောင်လုပ်နည်း…
လညျခြောငျးထဲငါးရိုးစူးပါကအမွနျသကျသာအောငျလုပျနညျးငါးအရိုးမကျြလြှငျအတေျာ့ကိုခံစားရခကျသညျမှာအားလုံးလညျးသိပွီး ဖွဈမှာပါ။ တဈခါတရံခဏလေးနဲ့ ပြောကျသှားပမေယျ့အခနျ့မသငျ့လြှငျဆးရုံတကျပွီးလညျခြောငျးကနေ ခှဲထုတျ ရတဲ့ အထိ ဖွဈတတျကွပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ငါးအရိုးမကျြလြှငျအလှယျတကူ ပွုလုပျနိုငျမယျ့အိမျတှငျးကုထုံးလေးမြားကိုရသမြှစုစညျး၍တငျပေးလိုကျပါတယျ။ ကိုယျနဲ့အဆငျပွရောနညျးကို ပွုလုပျနိုငျကွပါတယျ။ (၁)သံပုရာသီးကိုအခှံမာမြားခှါ၍ အလုံးကို သှားကွားထိုးသံဖွငျ့အပေါကျလေးမြားထိုးဆှထား၍ခတ်ေတမငြုံထားပါ။ အရညျကိုတဖွေးဖွေးမြိုခပြေးပါ။အခဉျြဓါတျကငါးရိုးမြားကိုတိုကျစားသှားပလေိမျ့မညျ။ (၂) ငှကျပြောသီးစားပါဘာငှကျပြောသီးဖွဈဖွဈအဆငျပွပေါသညျ။ (၃) ကွကျဥအကာကို သောကျပေးပါ။ငါးရိုးသညျအခြှဲမြားနှငျ့အတူကသြှားမညျ။ (၄)သံပုရာသီး သို့မဟုတျ သံပုယိုသီးကို ၄ စိတျခှဲ၍ ပါးစပျဟကာ အာခေါငျထဲကိုတဈစိတျခငျြးစီ အရညျညဈြ၍ သံပုရာရညျကိုခတ်ေတငုံထားပါ။ ပွီးမှရသောကျလိုကျပါ။ငါးရိုးမကျြခွငျးပြောကျကငျးသှားလိမျ့မညျ။ (၅)ဇီးဖွူသီးကို အလုံးလိုကျ ဝါးစားပွီးအရညျရောအဖတျပါ […]
မိုးကြိုးများပစ်နေချိန် နေအိမ်အတွင်း မပြုလုပ်သင့်သည့်အချက်များ….
မိုးကွိုးမြားပဈနခြေိနျ နအေိမျအတှငျး မပွုလုပျသငျ့သညျ့အခကျြမြား…. မိုးဦး၊ မိုးနှောငျးကာလမှာဆိုရငျ အခွားသော အခြိနျမြားထကျ မိုးကွိုးပဈခွငျးမြား ပို၍ ဖွဈပှားတတျပါတယျ။ အဲဒိလို မိုးကွိုးမြား အဆကျမပွတျ ပဈနခြေိနျမှာ မိမိတို့သညျ။ နအေိမျအတှငျး ရှိနပေမေယျ့ သတိထားရှောငျကွဉျရမယျ့ အခကျြတှေ ရှိပါတယျ။ မိုးကွိုးပဈနတေုနျးမှာ ရခြေိုးခွငျး၊ ပနျးကနျဆေးခွငျးတို့ ပွုလုပျရငျ အန်တရာယျရှိနိုငျကွောငျး ပညာရှငျမြား ပွောထားပါတယျ။ လြှပျစီးတှလေကျ၊ မိုးကွိုးတှပေဈနခြေိနျမှာ ရမေခြိုးရဘူးဆိုတာကို သိကောငျးသိနေ နိုငျပမေယျ့လညျး၊ မိုးကွိုးပဈ မခံရအောငျ တဈနညျးအားဖွငျ့ […]
မနကျခငျးတိုငျး အသုံးပွုနတေဲ့ သှားတိုကျဆေး ရဲ့ အသုံးဝငျပုံမြား မနကျခငျးအသုံးပွုနတေဲ့ သှားတိုကျဆေးရဲ့ အသုံးဝငျပုံမြားကိုယျတှေ နတေို့ငျးသုံးနတေဲ့ သှားတိုကျဆေးဒီလိုအစှမျးထကျမှနျး အခုမှသိရလို့ ကြေးဇူးပါသှားတိုကျဆေးကို မနကျတိုငျးသှားသနျ့ရှငျး တောကျပွောငျဖို့နဲ့ ခံတှငျးနံ့ကငျးစငျဖို့အတှကျပဲ အသုံးပွုလို့ရတာမဟုတျဖူးနျော… သှားတိုကျဆေးနဲ့ အခွားဖွရှေငျးလို့ရမယျ့ နညျးလမျးအခြို့လညျး ရှိပါသေးတယျ … (၁) အမဲစကျနဲ့ အမဲကှကျပွသာနာမြား … သှားတိုကျဆေး ၁ ဇှနျး နှငျ့ သံပုရာရညျ ၂ စကျ တို့ကို ရောမှပွေီး ခန်ဓာကိုယျပျေါမှာရှိတဲ့ […]
ခရီးသှားကွတဲ့အခါ မှောငျလာရငျကားပျေါမှာ ကငျမရာ တှနေဲ့ ဟိုရိုကျ၊ ဒီရိုကျမလုပျမိကွပါစနေဲ့…
ခရီးသှားကွတဲ့အခါ မှောငျလာရငျကားပျေါမှာ ကငျမရာ တှနေဲ့ ဟိုရိုကျ၊ ဒီရိုကျမလုပျမိကွပါစနေဲ့ ဒီအကွောငျးကို ဖွဈဖွဈခငျြးရေးခငျြပမေယျ့ တခြို့က ကိုယျCeleဖွဈခငျြလို့ရေးတယျ ထငျကွလိမျ့မယျ။ ကိုယျတိုငျကလညျး ကိုယျ့Wallမှာ ဟာသတှကေလှဲရငျ ဘာမှမတငျခငျြတာကွောငျ့ မရေးတငျဖွဈခဲ့ဘူး။ ဒါပမေယျ့ သတိထားစရာလေးတှရှေိလို့ သတိပေးအနနေဲ့ ပွနျမြှဝလေိုကျတာပါ။ ကိုယျက တကယျကွုံခဲ့ရတဲ့သူဆိုပမေယျ့ အမြားတှမေနဈနာရအောငျ မွို့နာမညျတှတေော့ ထညျ့မရေးတော့ပါဘူး။ စိတျပွလေကျပြောကျဖွဈအောငျ အလုပျလေးတှထေားခဲ့ပွီး ကြောငျးတုနျးကသူငယျခငျြးနဲ့ အထကျမွနျမာပွညျ ခရီးထှကျဖို့ပွငျဆငျလိုကျတယျ။ ရနျကုနျကနေ စထှကျပွီး မွို့တမွို့မှာ တညတညျးကွတဲ့အခြိနျထိ ဘာပွဿနာမှ […]
“အောင်ဖေ ညောင်းသွားပြီ” ဆိုတဲ့ စကားဖြစ်ပေါ်လာပုံနှင့် ရွှေမန္တလေးက ဂန္တဝင်မြောက်ယမကာလုလင်ကြီးများအကြောင်း
အောင်ဖေတော့ ညောင်းသွားပြီ🥂🍺🍺🥂 ငယ်ငယ်တုန်းက ခဏခဏ ကြားဖူးတဲ့စကား အခုမှဘဲ အဓိပ္ပါယ်သေချာသိရတော့တယ်။ မန္တလေးဆိုတာဂန္တဝင် ယမကာသမား များပေါ်ထွန်းရာမြို့ (Since –1886)Mandalay Rum ဆိုတာ ကျုံးရေနဲ့ ချက်မှ ရတဲ့ ကမ္ဘာ့ No. 1ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Firstclass….ဗျ။ အိမ်ရှေ့မင်းထန်းတောဆိုတာ ပြည်တွင်းစစ်ကြီး ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ဗ.က.ပ ရော ၊ ဗမာ့ တပ်မတော်ရော ဒီနေရာ မှာ စခန်းမချဖို့ နဲ့ မီးမရှို့ဖို့ နှစ်ဖက်နားလည်မှု့ […]
ပိုကျဆံခြေးထားပွီး ပွနျမဆပျပဲ တိုငျခငျြရာတိုငျဆိုပွီး ပွောလာခဲ့ရငျ ဒီစာဖတျပွီး ရဲရဲသာတောငျးလိုကျပါ မင်ျဂလာပါ စာဖတျပရိတျသတျကွီးရေ ပိုကျဆံခြေးထားပွီး ဆပျမယျ့သူကပွနျမဆပျပဲ တိုငျခငျြတဲ့နရော တိုငျဆိုပွီးပွောလာရငျ ဒီစာဖတျပွီး ရဲရဲသာတောငျးလိုကျပါ။ ခငျမငျလို့ပဲဖွဈဖွဈ တခွားသောအကွောငျးတှကွေောငျ့ပဲဖွဈဖွဈ ပိုကျဆံခြေးထားမိတဲ့သူမြားအတှကျ သိထားသငျ့တာလေးတှေ ကိုယျခငျြးစာလို့ ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။ ပိုကျဆံခြေးထားမိလို့ ဆပျမယျ့သူက မဆပျနိုငျဘူး ကွိုကျတဲ့နရောတိုငျလို့ပွောလာရငျ ဒီစာကိုဖတျပွီး ရဲရဲတောငျးလို့ရပါပွီ မဆပျနိုငျဘူး ကွိုကျတဲ့နရောတိုငျခငျဗြားတို့ငှတေိုးခြေးစားထားတာ ကြုပျတို့တိုငျလိုကျရငျ ထောငျထဲ ၅ နှဈရောကျသှားမယျ။ စသညျဖွငျ့ ဒီလိုစကားတှေ ခဏခဏကွားနရေပါတယျ။ […]